Olee otú iji tọghata FLV ka 3GP ọsọ ọsọ na mfe
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata FLV ka 3GP
FLV (Flash Video) bụ a na-ewu ewu akpa faịlụ Ọkpụkpọ, ejikarị ịnapụta video n'elu Ịntanetị. Ya mere, ị nwere ike nweta nza nke FLV videos na Ịntanetị. Mgbe ị chọrọ igwu ndị a FLV videos na mkpanaka gị na ekwentị mkpanaaka, ị chọrọ iji tọghata FLV ka 3GP. Nke ahụ bụ n'ihi 3GP bụ a multimedia akpa Ọkpụkpọ na tumadi ji on mobile ntị (2G, 3G, na 4G nile na-gụnyere).
Nke a ndu ebe a ga-egosi gị otú ị na-enwe ebube FLV web videos dị ka YouTube videos wdg na ekwentị mkpanaaka gị. Niile ị chọrọ bụ nnọọ oké FLV ka 3GP Ntụgharị. N'ihi na nke a, m ike na-atụ aro ị na-eji Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac). Ọ pụrụ ime ka FLV videos Ofụri Esịt dakọtara na ekwentị mkpanaaka gị. E nwere ihe fọrọ nke nta ọ bụla doro anya dị iche na video mma. Na akakabarede-agba bụ nnọọ ngwa ngwa. Ọ bụ nanị ole na ole simle nzọụkwụ.
Cheta na: Nke a oké omume-enye gị ohere pụọ online FLV videos. Ndị ọzọ okwu, ị nwekwara ike ibudata online FLV vidiyo na ekwentị mkpanaaka gị na ya.
1 Import FLV videos a FLV ka 3GP Ntụgharị
See bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke interface mgbe ị malite a software. Ozugbo, a faịlụ ibubata window ga-emeghe, na i nwere ike ịnyagharịa kọmputa gị nchekwa ịhọrọ video faịlụ na ị chọrọ. Alternatviely, ị nwere ike Ibu Ibu gị vidiyo site ikpuru-n-dobe.
2 Họrọ 3GP dị ka mmepụta format
Mepee a usoro si mmepụta format ndepụta site ọkụkụ format oyiyi ma ọ bụ ịpị ndọpụta ndepụta na n'akụkụ aka nri nke interface. Na, na, na-aga "usoro"> "usoro"> 3GP "ke mmepụta format ndepụta.
E nwere ihe ọzọ nhọrọ ị nwere ike họrọ dị ka mmepụta usoro. Ke "Ngwaọrụ" Atiya, ị pụrụ ịhụ fọrọ nke nta niile na-ewu ewu mobile igwe. Ị nwere ike dị họrọ gị onwe gị na ekwentị mkpanaaka.
3 tọghata FLV ka 3GP
The ikpeazụ nzọụkwụ bụ see "tọghata" button na ala-nri akuku nke a usoro isi interface. Na, na, a smart FLV ka 3GP ga-amalite tọghata gị video faịlụ ka usoro ị chọrọ. Akakabarede usoro ga-dị nnọọ ewe gị a nkeji ole na ole.
Mgbe akakabarede, ị nwere ike pịa "Open nchekwa" nhọrọ ke window ngwa ngwa ahụ gị na-achọsi ike .3gp faịlụ. Ugbu a, ị nwere ike nyefee .3gp faịlụ gị na ekwentị mkpanaaka na obi ụtọ na ọ laa.
Olee otú iji tọghata MP4 ka 3GP
Olee otú iji tọghata MSWMM faịlụ ka AVI
Olee ka jikota Video na Audio
Olee otú Record Online Audio na Enweghị Ogo Loss